China Compressors ndị na-emepụta na ndị na-ebu ngwaahịa | KAIQUAN
Ngwaahịa a na ọtụtụ-eji ulo oru ndi dị ka papermaking, sịga, ahịa ọgwụ, sugar Ndinam, akwa, nri, nkà mmụta banyere ígwè, ịnweta nhazi, Ngwuputa, kol ịsa, fatịlaịza, mmanụ nụcha, chemical ụlọ ọrụ, electric ike na ngwá electronic. Eji maka agụụ evaporation, agụụ ịta, regaining agụụ, agụụ impregnation, agụụ ihicha, agụụ ihicha, agụụ ihicha, agụụ njikwa, agụụ ịme anwansị, gas mgbake, agụụ distillation na ndị ọzọ Filiks, eji imipu unyi anaghị agbasa na mmiri, ọ bụghị nwere gas nke ihe siri ike na-eme ka usoro pumped na-emepụta agụụ. N'ihi na mmịpụta gas bụ ihe dị mkpa n'oge ọrụ ọrụ. Enweghi uzo nke metal na-aghapu imeghari ibe ya na mgbaputa, ya mere o di nma maka ikpo oku nke di mfe uzuoku ma gbapu ma obu mebie mgbe okpomoku di.
Oke ikuku dị elu: 3000-72000m3 / h
Nsogbu nrụgide: 160hPa-1013hPa
Okpomọkụ nso: Na-agbapụta gas okpomọkụ 0 ℃ -80 ℃; Ọnọdụ mmiri ọkụ na-arụ ọrụ 15 ℃ (nso 0 ℃ -60 ℃)
Hapụ usoro njem: Onweghi mmanu siri ike, gas apughi inwu mmiri ma obu obere mmiri agbaze mmiri na aru oru
Ọsọ: 210-1750r / nkeji
Mbubata na mbupụ ụzọ: 50-400mm
1. Mmetụta ike nchekwa dị ịrịba ama
Hyddị ihe eji emepụta hydraulic kachasị mma na-eme ka arụmọrụ nke mgbapụta dị na mpaghara 160-1013hPa dịkwuo mma, ya mere ọ dị mma ma na-echekwa ike.
2. Ezigbo ọrụ na ntụkwasị obi dị elu
Ihe eji arụ ọrụ hydraulic kachasị mma, ihe nrụpụta ahụ na-ebute oke obosara-na-dayameta, nke mere na mgbapụta ahụ nwere arụmọrụ dị elu karịa nfuli usoro ndị ọzọ mgbe ha na-enweta otu mgbapụta mgbapụta. N'otu oge ahụ, imepụta ihe owuwu dị mfe na-eme ka mgbapụta ahụ rụọ ọrụ nke ọma ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi, mkpọtụ ahụ dịkwa ala.
3. Pụtara ìhè bughi uru
Single-ogbo otu-eme kehoraizin Ọdịdị, mfe na a pụrụ ịdabere, mfe ịnọgide na-enwe. Nrụpụta ahụ nke mgbapụta ahụ na baffle nwere ike ime ka otu mgbapụta zute ihe achọrọ nke ọnọdụ ọrụ abụọ.
4. Mgbanwe siri ike
Iji mezuo ihe dị iche iche na-egbochi imebi emebi, akụkụ ahụ na-asọpụta nwere ike iji ihe igwe anaghị agba nchara. A na-agbasa akụkụ ndị ahụ na-agba agba na mkpuchi mkpuchi imebi polymer iji mezuo ihe a chọrọ nke corrosion siri ike. Ogwe osisi ahụ nwere nhọrọ nchịkọta na akara akara iji mezuo ihe dị iche iche ọnọdụ ọrụ
Nke gara aga: 2BEX agụụ mgbapụta
Osote: HD Series Vetikal Diagonal Flow mgbapụta